PUBG Mobile ကို ၀၁.၀.၀.၀ အထိ Vikendi မြေပုံနှင့်ထပ်မံပြီး | Androidsis
အခြား Vikendi မြေပုံအသစ်နှင့်အတူ update ပြုလုပ်သည့် PUBG Mobile အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သော update ဖြစ်သည်, နှင်းလျှောစီးနှင့်အခြားအောက်မှာဖော်ပြထားသောအသစ်အဆန်းစီးရီးများ။ ဤခရစ္စမတ်နေ့စွဲများအတွက်ရောက်ရှိလာသည့်မြေပုံအသစ်သည်ဤအံ့မခန်းဖွယ်တိုက်ပွဲတော်၏ပရိသတ်များအတွက်အရာရာကိုချိုးဖျက်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Vikendi ကိုလာမည့်နေ့ရက်များတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အတိအလင်းဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မှာငါတို့လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကပြောခဲ့သည်။ ဒါက သငျသညျယခုဗားရှင်းအသစ် update လုပ်ရင်တောင် ၀.၁၀၊ Vikendi၊ စနိုးမိုဘိုင်းစီးရီးနှင့်စတင်သည့်snowရိယာရှိ snowball ရန်ပွဲကဲ့သို့သောအခြားအံ့သြဖွယ်ရာများကစားခြင်းကိုစတင်နိုင်ရန်အတွက် server မှအသစ်ပြောင်းခြင်းကိုသင်စောင့်ရမည်။
1 Vikendi မြေပုံအသစ်
2 PUBG Mobile ၏ ၀.၀၁ ဗားရှင်းအသစ်တွင်ဘာတွေလဲ
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကထုတ်လွှင့်သော beta ကတည်းကကျွန်ုပ်တို့သည် Vikendi မြေပုံသစ်ကိုသက်သေခံနိုင်ပြီးစမ်းသပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ပွင့်လင်းဒေသများဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ခုမြေပုံ, သော အဆိုပါ "မြွေ" သို့မဟုတ် "မြွေ" (မြေလဲကျကစားသမား ပြီးတော့အဲဒီကနေသူတို့အောင်မြင်မှုရဖို့တွားသွားတာပါ။ သူတို့မှာခက်ခဲတာထက်ပိုများလာမှာဖြစ်ပြီး၊ တိုက်ရိုက်တိုက်ပွဲတွေအတွက်မြို့ကြီးများနှင့်နေရာများမှာပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
အာရုံစူးစိုက်မှု ကျွန်းပေါ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့ရဲတိုက်Vikendi ရဲ့အပူဆုံးအစက်အပြောက်တစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ Vikendi ၏အထူးအချက်များလည်းဖြစ်လိမ့်မည်။
PUBG Mobile ၏ ၀.၀၁ ဗားရှင်းအသစ်တွင်ဘာတွေလဲ
PUBG မိုဘိုင်း6x6km Vikendi မြေပုံအသစ်ဖြင့်အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်ဤခရစ်စမတ်နေ့များအတွက်အထူးနှင်းကျသောဆီးနှင်းအခင်းအကျင်း၊ အာရဗီဘာသာစကား (နှင့်၎င်း၏ဖြစ်နိုင်ချေဆာဗာအသစ်) တို့ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ဆာဗာများအကြားအပြန်အလှန်ကိုက်ညီခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်အသစ်သောအသစ်သောအရာများမှာကျွန်ုပ်တို့သေပြီးနောက်ကစားသမားများကိုသတင်းပို့နိုင်ခြင်းနှင့်ဂိမ်းများကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်၎င်းတွင်ကိုယ်ပိုင်ရှိမည့်လက်နက်အရေခွံတိုးတက်မှုစနစ်ဖြစ်သည်။
အခုငါတို့သွားပြီ အပြည့်အဝအကျဉ်းချုပ်နှင့်အတူ သတင်းအားလုံး၏
Vikendi: ၆ x ၆ ကီလိုမီတာမြေပုံ။ ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် 20:0 UTC မှာဒီဇင်ဘာလ 00 ရက်နေ့တွင် download လုပ်ပါ ၎င်းကို ၂၄ နာရီအကြာတွင်ကစားနိုင်သည်။ Tencent Games မှအကြံပေးသောအချက်သည်မြေပုံကိုအရင် download လုပ်ရန်ဖြစ်သည်
Vikendi သီးသန့်ကားအသစ် စွန်.
အသစ် ရာသီဥတုအကျိုးသက်ရောက်မှု: ဆီးနှင်း။
ထည့်သည် snowball ရန်ပွဲ အဆိုပါ Vikendi စတင်areaရိယာရန်။
Snow theme အသစ်ကို main menu တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ခရစ်စမတ်ခေါင်းလောင်းများကိုဂန္တ ၀ င်ပုံစံအားလုံးတွင်စုဆောင်းပါ။ ပွဲစင်တာရှိလက်ဆောင်များအတွက်လဲလှယ်ပါ။
အသစ် Cross-server ကိုတွဲဖက်မှု။ ၎င်းကိုဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်ကစားသမားများအနေဖြင့်အခြားဆာဗာများပေါ်တွင်တူညီသောအဆင့်ရှိကစားသမားများနှင့်လိုက်ဖက်နိုင်သည့်အခွင့်အရေးရှိသည်။
အသစ် "layout" ကိုထည့်သွင်းထားသည် ကြီးမားသောလက်နှင့်ကစားသမား.
Erangel ၏စတင်ကျွန်းပေါ်ရှိ Team Challenge ဆုရသူများအတွက်အမြင်အာရုံတစ်ခုကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ရာသီ ၁ မှအနိုင်ရသည့်အသင်းများသည်သူတို့၏သက်ဆိုင်ရာဆာဗာများနှင့်စနစ်များတွင်စတင်သည့်ကျွန်း၌ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ရာသီ ၂ အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက် ၀၀း၀၀ UTC တွင်စတင်သည်။
Team Challenge မှအကောင်းဆုံးကစားသမားများ၏ရလဒ်များကို Team စာမျက်နှာများတွင်ပြသမည်ဖြစ်ပြီးအခြားကစားသမားများနှင့်မျှဝေနိုင်သည်။
Quick Chat ထဲသို့ command အသစ်များထပ်ထည့်သည်။
လက်နက်ပြီးသွားသည့်စနစ်ကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ကစားသမားများ သူတို့ကအချို့ချော update လုပ်ဖို့ Lab မှပစ္စည်းများသုံးနိုင်သည် ကစားသမားတစ် ဦး အသတ်ခံရသည့်အခါအထူးသတ်ဖြတ်မှုများပြုလုပ်ရန်လက်နက်များ၊ ချက်တင်စကားပြောသတ်သတ်မှတ်မှတ်သတ်ဖြတ်ခြင်းမက်ဆေ့ခ်ျများ၊
နေ့စဉ်မစ်ရှင်များပြီးဆုံးချိန်တွင်ကစားသမားများအား M416 Glacier လက်နက်ပြီးအောင်လက်ခံရန်အခွင့်အလမ်းပေးသော Lucky Treasure ကိုထည့်သွင်းထားသည်။
ထည့်သည် ၏အကျိုးကျေးဇူးများ ရာသီ။ လက်နက်ချပြီးသောဆုများနှင့်အထူးလျှော့စျေးများရရှိရန်အမျိုးမျိုးသောပမာဏကိုစားသုံးပါ။
ယခုကစားသမားများ ဒုတိယဘာသာစကားရွေးရန်မလိုအပ်ပါ တွဲဖက်ခြင်းနှင့် chat ရန်။
အခြား Big PUBG Mobile Update အသစ် Vikendi မြေပုံနှင့်အတူလာသည် ပြီးတော့ကျနော်တို့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေအားလုံးကစားကြရအောင်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » PUBG Mobile ကို Vikendi မြေပုံအသစ်၊ နှင်းလျှောစီးနှင့်အခြားအရာများဖြင့်အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်
Fubo တီဗီမှကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည့်အရာအားလုံး၊ Movistar စီးရီးအတွက်ကြေးပေးသွင်းခြင်းနှင့်နောက်ထပ်ရုပ်သံလိုင်း ၁၃ ခုနှင့်စျေးကွက်အတွင်းစျေးအသက်သာဆုံးဖြစ်သည်